Tsvaga iyo itsva iCloud Photo Library, yava kuwanikwa pawebhu | Ndinobva mac
Javier Porcar | | ICloud, Noticias
Parizvino, isu tine akawanda makore masevhisi, mazhinji acho ari muchinjika-chikuva. Kuwana sevhisi yakazara inotibvumidza kuchengeta mafaera, kushanda nevanyori vezvinyorwa, maspredishiti uye zvirongwa zvekugadzirira mharidzo, tinogona kuziva akati wandei. Asi panguva imwechete iyo inotibvumidza kuchengeta edu mafoto, nekuaisa mumapoka nemaalbum uye kuagovera iwo netsamba kuburikidza neMail Drop kana Facebook, pane mashoma kwazvo. Panzvimbo iyoyo, iyo iCloud Photo Library inowanikwa kubva nhasi mune imwe vhezheni.
Zvakanaka kubva nhasi tinogona kuita zvese izvi muICloud pikicha raibhurari inowanikwa pane webhusaiti ye icloud. Huye, iyo vhezheni muBeta chikamu uye inowanikwa kune vamwe vashandisi yave yepamutemo.
Takadzidza nezve shanduko idzi mune beta vhezheni yeICloud sevhisi: beta.icloud.com. Icho chitsva chimiro chayo chitsva MacOS Sierra. Nenzira iyi zviri nyore kwazvo kutenderedza. Izvo zvakanaka kana iwe uchida kuratidza mafoto akatorwa echiitiko pakombuta yeshamwari kana mushandirwi kana kunyatso tarisa mifananidzo yatinayo pane yedu iPhone mune yakakura saizi.
Iwo maficha anosanganisira iyi vhezheni ndeaya:
Kugona kubvunza mifananidzo na Albums (yakafanana neSierra kana iOS vhezheni) kana nesangano Nguva. Tichavawana kuburikidza nebara repadivi.
Resize kuona kwemifananidzo, ine bara yekuwedzera kana kudzikisa.
Kugona kuwana pikicha kuti uione yakakura uye dzokera kualbum.
Isa kana kurodha mifananidzo kukomputa iyi.
mugove paFacebook kana netsamba (tinotarisira kuti mamwe masevhisi mune ramangwana).
Wedzera mifananidzo kualbum.
Goverana uye wedzera kuarubhamu, chete mapikicha ezuva chairo kana kugovana chete iwo mapikicha eimwe album.
Asi mushure mekuishandisa, chii chimwe Ini ndinorohwa nespeed yeiyo interface, iyo isingapesane neiyo Photos application yeMacOS Sierra, nekuti kufamba kwayo kuburikidza nayo kunogadzikana uye kwakanaka. Kunyangwe vhidhiyo kurodha pasi uye kuona haina chainopomerwa. Pamwe mhando yacho haisi iyo yepamusoro inowanikwa yevhidhiyo kana yekutora mifananidzo, asi isu hatipotse kushomeka kwemhando Uyezve, PIP basa rinowanikwa muvhidhiyo yekutamba.
Neichi chekuwedzera, Apple yatora danho hombe kumberi mukugadzirisa mafoto mugore rayo. Ehezve, kuti uwane izere kugona kwayo, iwe unofanirwa kunge wahaya chirongwa cheICloud chakati kurei pane chekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tsvaga iyo nyowani iCloud Photo Library, yava kuwanikwa pawebhu
Kwenguva yekutanga munhoroondo Consumer Reports haina kukurudzira kutengwa kweMacBook Pro